I-50 YEENWELE EZIPHAMBILI ZEASIA ZAMADODA (ISIKHOKELO SE-2021) - IINWELE ZAMADODA
Izitayile ze-50 zaseAsia zaMadoda
Eyona Iinwele Zamadoda Izitayile ze-50 zaseAsia zaMadoda
Amadoda aseAsia athambekele ekubeni neenwele ezithe nkqo, nezityebileyo, kunye neenwele ezilungileyo zaseAsia zamadoda zithatha eli thuba. Kunye neenwele ezininzi ezipholileyo zabafana baseAsia, inga…
Amadoda aseAsia athambekele ekubeni neenwele ezithe nkqo, nezityebileyo, kunye neenwele ezilungileyo zaseAsia zamadoda zithatha eli thuba. Ngeenwele ezininzi ezipholileyo zabafana baseAsia, kunokuba nzima ukukhetha ukusika kunye nesitayile esinye. Ukusuka kwi ngaphantsi okanye ukuphela kwetaper kumacala ukuya mfutshane , Phakathi okanye iinwele ezinde ngaphezulu, iinwele ezithandwayo zamadoda aseAsia aqala kwikama ukuya kwi-quiff, ukubuyela umva, ipompadour, i-faux hawk, i-fringe, iinwele ezi-spiky, kunye neendlela ezahlukeneyo zokucheba iinwele. Kwaye iinwele ezothusayo zaseJapan nezaseKorea (Kpop) ezinempembelelo kakhulu kwiinwele ezintsha, amadoda aseAsia ahlala kwindawo kunye neenwele eziphezulu.
Ngelixa iinwele zaseAsia zinokuba nzima ukuthambisa, abafana baseAsia banokwenza isitayile sazo zonke iinwele zamadoda ezithandwayo besebenzisa imveliso eyomeleleyo yeenwele ipomade okanye i-wax . Nokuba ufuna iinwele ezimfutshane ezintle ngenkangeleko ecocekileyo okanye iinwele ezinde ezizodwa ezinxitywa ziinkwenkwezi zaseKorea, sihlanganise iinwele eziphezulu zaseAsia.
Nazi iinwele ezilungileyo zamadoda aseAsia ukukhuthaza ukuba ufumane kunye nesitayile sokubukeka okuhle!
MbiniUkucheba kweenwele zaseAsia
3Izitayile ezimfutshane zaMadoda aseAsia
5Izitayile ezinde zaseAsia
Shumi elinanyeFaux Hawk
16Ezona Mveliso ziNwele ziLungileyo kwiNwele zaseAsia
Iinwele ezisezantsi zaseAsia zisenokuba zezona zinwele zishushu kubantu baseAsia ngoku. I-undercut kukucheba okufutshane kakhulu emacaleni okunciphisa ubude kunye nobukhulu beenwele kwaye kugxininise iinwele ezinde ngaphezulu.
Ngokubanzi, i-undercut iqala phezulu kakhulu emacaleni kwaye inciphise iinwele bonke ubude obufutshane kakhulu. Nangona kunjalo, amadoda anokukhetha ukubuza i-barber yawo ukuba i-undercut iphele ukuze icofe amacala. Ngokufanayo, i unqamlezo lwangaphantsi ayifuni taper kwaye inikezela umahluko ngakumbi.
Ezinye zeenwele ezithandwayo zangaphantsi zamadoda aseAsia zibandakanya i-backcut undercut, ikama ngaphezulu kwe-undercut, ipompadour, i-fringe kunye ne-quiff.
Eyona nto ibalulekileyo, i-undercut yaseAsia inokudityaniswa kunye naziphi na iinwele ezithandwayo zokudala ukubukeka okuhle, okuhle.
Ukucheba kweenwele zaseAsia
Ukuphela kweAsia kunesitayile kwaye kusebenza kakuhle phantse kuzo zonke iintlobo zesitayile. Zininzi iindlela zokucheba iinwele zaseAsia onokukhetha kuzo, ke nokuba ufuna into enobuhle kunye ne-badass okanye ingcali kunye neklasi, uqinisekile ukuyifumana. Ezona ntlobo zintle zokusika i-taper fade zibandakanya ukuphakama okuphezulu, okuphantsi, embindini, okanye kolusu.
Umzekelo, ukucheba iinwele ezisezantsi kuqhelekile kwizinwele zamadoda eziqeqeshiweyo zeshishini kuba zidibanisa iinwele kodwa azivezi kakhulu isikhumba entloko. Ukuphela okuphantsi kwamadoda aseAsia kuqala ngaphezulu kwendlebe kwaye kujikeleze macala, ngasemva kweendlebe, ukuya ezantsi kwi-nape. I-Smart, ilula kwaye ilula kwisitayile, ukuphela okuphantsi kujongeka kulungile ngazo zonke iintlobo zokusikwa kunye nezitayile.
iinwele zamadoda anempandla
Inwele ephezulu yokufota ijongeka ngathi inemvukelo, yeyangoku, kunye ne-chic entle. Isiphelo esiphakamileyo siqala nje ngezantsi kweenwele ezingasentla kwaye sidibanisa iinwele ngokukhawuleza kwizinwele ezimfutshane kakhulu. Indawo ephezulu yaseAsia ijolise amehlo akho kwizinwele ezinde ngaphezulu. Ilungele abantwana bezikolo eziphakamileyo, abafana beekholeji, kunye nabafana abancinci abafuna ulondolozo olusezantsi, imbonakalo yefashoni.
Ngokwendalo, umbane ophakathi uwela ndaweni ithile phakathi kwezi zinto zigqithisileyo. Ukucheba iinwele kuphakathi kunokuba yindawo elungileyo ukuqala ukuba awuqinisekanga ukuba yeyiphi oyikhethileyo.
Okokugqibela, ulusu olucimileyo lokucheba iinwele zaseAsia luphelile kakhulu oludibanisa iinwele zakho ziye entlonzeni. I-bald fade ingaqala phezulu, isezantsi okanye embindini kwaye iinwele zakho ziya kunciphisa iinwele zakho ngenkangeleko ecocekileyo.
Ekugqibeleni, i-taper fade haircuts zihlala zisisiseko samacala amafutshane afanelekileyo, iinwele ezinde eziphezulu zamadoda aseAsia. Unokufaka ngaphezulu uye kwiinwele ezingcolileyo, okanye ufumane umva obuyindindayo, ikama ngaphezulu kokuphela, ipompadour, ikhaba, ifeksi yokufela, icala lasecaleni okanye abasebenzi abasikiweyo.
Ukusuka eTshayina ukuya eKorea, eJapan, eVietnam nakumadoda akwiiPhilippines, ezi zinwele zipholileyo zisebenzela wonke umntu.
Izitayile ezimfutshane zaMadoda aseAsia
Iinwele ezimfutshane zamadoda aseAsia ziqala ngokucocekileyo kunye neklasikhi ukuya kumdaka kunye nezala maxesha. Amadoda aseAsia aneenwele ezimfutshane anokucheba okuninzi okuqhelekileyo kunye nezitayile onokukhetha kuzo, kubandakanya ukusikwa kwe-buzz, ukunqunyulwa kweqela labasebenzi, isityalo saseFrance, icala elisecaleni, umphetho omfutshane, kunye neenwele ezi-spiky.
Iinwele ezimfutshane ezimfutshane zibonelela ngezixhobo ezilula zokuvumela isitayile, ukuvumela abafana baseAsia ukuba bathambise iinwele zabo ezingqindilili nezirhabaxa ngesixa esincinci se-pomade, i-wax, okanye udongwe.
amadoda aneenwele ezinde ngamagxa
Ngelixa i-buzz cut fade okanye i-high and tight haircut kulula ukuyifumana kwaye ilula kwisitayile, ziindlela ezimfutshane kakhulu ezinganiki naluphi na uguquko ukutshintsha inkangeleko yakho. I-crew ende enqunyulwe ngamacala aphelileyo okanye i-top textured top inganika abafana ukhetho oluninzi.
Ngama-intshi ama-3 ukuya kuma-4 ubude ngaphezulu, amakhwenkwe aseAsia anokuziphotha iinwele zawo, azishiye zingcolile, azicofe icala elinye kwicala lokutshayela iinwele ze-Ivy League, azikame zonke ziye phambili kwisitayile, okanye enze uyilo ngenkangeleko eyodwa .
Ekugqibeleni, amadoda aseAsia anokwenza isitayile sezona ndlela zilungileyo zokunxiba xa besebenzisa iimveliso zesitayile esifanelekileyo.
Iinwele ezide eziphakathi zamadoda aseAsia ziyahlukahluka kwaye zinika uninzi lwezinto ezintle onokukhetha kuzo. Ngapha koko, unokwenza uninzi lweendlela ezithandwayo kunye neenwele ezilungileyo. Ngefade, i-undercut, okanye amacala achetyiweyo kunye neenwele ezinde ngaphezulu, abafana baseAsia bayakwazi ukuhombisa ikama ngaphezulu, ipompadour, i-faux hawk, i-angular fringe, okanye i-hairy hair.
Umzekelo, ngokukhulisa iinwele zakho ukuya kuma malunga nee-intshi ezi-3 ukuya kwezi-5 ngaphezulu, abafana banokongeza ukuthungwa ngekhrimu yokuhombisa iinwele kwaye baye kwisitayile esimdaka, esirhabaxa nesifashoni.
Amakhwenkwe aseAsia nawo anokuya kwikama ngaphezu kokuphela kunye nenxalenye enzima ye-chic kakhulu, iinwele zangoku. Vasa nje zonke iinwele zakho kwelinye icala ukonyusa indawo echetyiweyo kunye nokugqiba isitayile ngemveliso yeenwele ezomeleleyo ukugcina ujongo imini yonke.
Eminye imibono yamadoda yokucheba iinwele ibandakanya ukuceketheka kwe-hawk fade, ukubuyela umva ngaphantsi kwe-undercut, kunye nomphetho omde oxhonywe ebunzi.
Izitayile ezinde zaseAsia
Amadoda aseAsia aneenwele ezinde asikelelwe ngesakhono sokukhula sihle, sicwebezele ngqo, sineenwele ezishinyeneyo. Iinwele zaseAsia zibolekisa kakuhle kwiinwele ezinde, ke ayothusi into yokuba amadoda amaninzi aseAsia athathe isigqibo sokukhulisa iinwele zabo.
Ezinye zeenwele eziphezulu eziphezulu zabafana baseAsia ziqala ukusuka kwi-intshi ye-6 yeenwele ukuya kubude obude budlula emagxeni.
Nokuba ukhetha i-backcut ende ende, i-buny man, i-ponytail yendoda evulekileyo, okanye ungqameko olude olunombala wendalo, kukho iinwele ezinde zase-Asia eziza kulungela izinto ozikhethayo.
Ikama yaseAsia ngaphezulu yenye yezona zinwele zishushu ngaphakathi koluntu nakwihlabathi liphela. Ngapha koko, i-comb over fade kunye ne-undercut comb iye yaqina yomelele kwiindawo zokucheba iinwele iminyaka eliqela ngoku.
Abantu baseAsia abathanda ukwenza izinto ngeendlela ezahlukeneyo kwizinwele zabo kufuneka baqwalasele ikama njengoko liziboleka ngokugqibeleleyo njengenkqubo yokujonga ishishini enokuthi iphindwe kabini njengenwele epholileyo kuseto lwentlalo. Umahluko phakathi komfanekiso wenkwenkwe ococekileyo nongenabubi konke kukusikwe kunye nesitayile.
Nokuba ukhetha ikama encinci yokuphela ngaphezulu kwayo yonke into ehamba kwicala elinye okanye ihipster engaphantsi kwekama ngaphezulu nenxalenye enzima, isitayile sithandeka kodwa sinobunkunkqele.
Ngomhlaba ophakathi ocutha ubunzima beenwele zakho ezingqindilili, zama ukufiphala okuphakathi okanye ukuphela kwendlela kwaye zinike amandla okuzama ngeendlela ezahlukeneyo.
Ukusuka kwikama elifutshane ukuya kwelide, ngekhe uhambe gwenxa ngale nkangeleko.
Izinwele ezicocekileyo zinokuba yinto eyoyikekayo yamadoda aseAsia aneenwele ezingqindilili. Iinwele zeSpiky zibonelela ngeendlela ezahlukeneyo zokwenza isitayile, nokuba ufuna imitya eshinyeneyo, ifeksi yobude obuphakathi, okanye ukuphela okuphezulu okunamaqhosha amade.
Amadoda amaninzi aseAsia afumanisa ukuba ukuqala ngokunqunyulwa kwenkwenkwana eqhelekileyo - ukuphela kumacala anenwele ezimfutshane ezishiya ii-intshi ezi-2 ukuya kwezi-3 ngaphezulu-ziyabavumela ukuba basuke kubuchwephesha emini baye kwi-spiky kwaye kushushu ngokuhlwa.
Icebo lokwenza isitayile seenwele zaseAsia ziyimveliso yeenwele zamadoda ezomeleleyo. Okulungileyo, ukubamba okuphezulu okuphuma kwiimveliso Suavecito , UBaxter waseCalifornia kwaye Uluhlu izokunceda ukugcina iinwele zakho zi spiked ngalo lonke usuku.
Iinwele ezi-slick zangasemva ezi-Asia ziyaqhubeka nokuba ziindlela ezishushu zamadoda. Njengokulungiswa kweenwele emva kuye kwavela ngokuhamba kwexesha, amadoda aseAsia afumanise iindlela ezininzi ezinesitayile sokukama iinwele zabo emva kunye nokunyikima ukujonga.
Mxelele nje i-barber yakho ukuba ufuna ukubuyela umva ngendlela engaphantsi okanye ubuyile umva. Ngokobuninzi bokusebenza ngokungafaniyo kunye neenwele ezingathandekiyo, sika amacala amafutshane kakhulu kwaye unokuhlala uswitsha phakathi komqolo odibeneyo, ikama ngaphezulu, kunye nobungangamsha.
Ukulungiselela iinwele ezolileyo zakudala, sebenzisa pomade eyomeleleyo ngokuqaqamba okuphezulu kwaye uhlambe iinwele zakho emva kwekama. Ukugqitywa kwendalo, ukugqiba kwendalo, khetha imveliso yeenwele ze-matte ngokubamba okuphakathi, dibanisa iinwele zakho, emva koko usebenze ngeminwe yakho.
Enye yeenzuzo zoboya obungqingqwa, obuthe tye kukuba abafana baseAsia baya kuhlala bekwazi ukwenza isitayile seenwele ezibuyileyo.
Iinwele ze-quiff yenye yezinto ezithandwayo nezithandwayo kakhulu emadodeni, kwaye ngokuqinisekileyo zilungele iinwele zaseAsia. Njengenye yeenwele ezilungileyo kumadoda aneenwele ezishinyeneyo, i-quiff yanamhlanje inokufakwa isitayile ngeenwele ezimfutshane okanye ezinde ngaphezulu ngamacala aphelileyo. Fumana umgca ujikeleze iinwele kunye neetempile zokugqiba okucocekileyo.
Xa uthambisa i-quiff haircut, ungafaka i-spikes okanye uhlambe iinwele kwimitya eshinyeneyo. Abafana abanobude obude obuphakathi kweenwele ezinde baya kuxabisa umthamo we-quiffs, intshukumo kunye nokuhamba.
Kwaye nangona uninzi lweenwele ezilungisiweyo zinokufezekiswa ngokulula ngesithambiso sokuhombisa, iinwele zaseAsia zinokuba neenkani ngakumbi kwaye zifuna imveliso efana Ukuhambisa irabha yeGatsby .
Icandelo eliseAsia linwele ethembekileyo neqinisekisiweyo yamadoda. Ukuba ungaphezulu kohlobo lweenwele zodidi okanye ufuna ukujongwa okufanelekileyo kweofisi, kunzima ukungahambi kakuhle nenxalenye yecala lesiko.
Iinwele zaseAsia zihlala zityebile, ngoko ke iindlela ezimfutshane zilungile apha. Ngapha koko, ungasoloko ufumana indawo esecaleni yokuphela nenxalenye enzima yokuyiphelisa inkangeleko.
inombolo 8 ubude beenwele
Icandelo leenwele ezisecaleni likwavumela ukuba kube lula ukwenza isitayile, nokuba ngaba ukwahlula kwakho zonke iinwele zakho kwelinye icala zinokucoceka, ukugqitywa kokumiswa okanye ukushiya zikhululekile kwaye zidibene. Ngokwe-twist eyahlukileyo, kama iinwele zakho ecaleni nasemva kwisitayile esidibeneyo sokutshayela.
Emva koko sebenzisa i-pomade ekhazimlayo okanye ijeli yenwele yamadoda yakudala, nangona imveliso enobunzima inokudala ubume kunye nesitayile sakho.
I-Asia faux hawk yizinwele ze-badass ngokungafani nenye. Amadoda aseAsia anganyikinya i-fohawk ngokungafaniyo nenye imibulelo kubuhle beenwele kunye nobungqindilili, ke ayothusi into yokuba le nwele yanamhlanje yenye yezona zinwele zilungileyo zamadoda aseAsia. Ukuphuhlisa umahluko ogqibeleleyo, fumana i-taper fade ephezulu okanye i-bald fade haircut emacaleni.
Kuba mfutshane kunene kunene iinwele ezimfutshane ngaphezulu, faka i-matte pomade ephezulu yokubamba zonke iinwele zakho kwaye ujonge kumbindi wentloko yakho.
Kwelinye icala, ukuba uneenwele eziphakathi ukuya kwezide, ungasebenzisa imveliso enye ukwenza i-faux hawk yokutshayela kunye ne-faux efikelela kwi-intshi ezi-4 ukuya kwezi-6 ubude.
Iinqwelo ezisikiweyo zeenwele zaseAsia zezona zilula, zokugcina iinwele eziphantsi kubafana. I-classic crew cut cut haircut ifuna phantse akukho stylling kwicala lakho. Ngokufiphala okuphezulu emacaleni kunye neenwele ezimfutshane ngaphezulu, abasebenzi basika uxinzelelo lwendalo lweenwele zakho ngenkangeleko ecocekileyo.
Iinwele ezingasentla zinokushiywa ziisentimitha ezimbalwa ukuba ufuna ubhetyebhetye ngakumbi nesimbo sakho, okanye ukuba ufuna ukubonakala umangalisa kwaye uzilungise kakuhle xa uphuma ebhedini, ungaya nge-buzz sika.
Nangona kunjalo, ukuba amadoda aseAsia esiva isidingo sokugcina iinwele zawo okanye ziqhube imveliso, i-Ivy League iinwele, isityalo saseFrance kunye nomphetho omfutshane konke kufanelekile. Ivy League ifuna nje icala elitshayelwe ngaphambili ngelixa isityalo saseFrance sitsala zonke iinwele phambili kwaye silele tyaba ebunzi.
Okokugqibela, isinqe esifutshane esimdaka sinokukwenza ukuba kushushu okungaqhelekanga, okungakhathaliyo okuxhaphake ngokubanzi phakathi kwabafana abancinci baseKorea abalandela izitayile zeKpop zokucheba iinwele.
I-Asia buzz cut is masculine, edgy, kwaye kulula ukuyifumana. Enoba ufuna i-buzz cut fade okanye i-haircut yonke ejikeleze i-buzzed, uya kuyithanda le nwele imfutshane kakhulu.
Amadoda aseAsia anokude azichebe iinwele zawo ekhaya ngesikizi esihle. Ungazami kwaye unesibindi, zama i-buzz cut ukuba ufuna i-hairstyle epholileyo akufuneki uchithe ixesha kwisitayile.
uphawu lokubala ilanga
Iinwele zefringe ziphakathi kweenwele eziphezulu zamadoda aseAsia. Ngapha koko, nangona iinwele ezinamafutha zixhaphakile kwihlabathi liphela kwezi ntsuku, kukho abathile abakholelwa ukuba le ndlela iqalile kwi-anime yaseJapan nakwimidlalo yevidiyo.
Nokuba yeyiphi na indlela, iinwele ezinqamlezileyo zinokongeza ubume obongezelelweyo malunga nasiphi na isitayile, nokuba ukhetha umphetho omfutshane okanye omde.
Iinwele ezithunyelweyo zase-Asiya zivela kwi-Kpop. Iinwele eziphakathi ukuya ezinde zaseAsia ziboleka kakuhle kwisiphithiphithi, sombala weenwele.
Ngelixa amacala anokuphela emfutshane kakhulu okanye acofwe nje ngokwaneleyo ukuba abe mfutshane kuneenwele ngaphezulu, ubude kunye nesitayile ngaphezulu zibonelela ngenkangeleko.
Abafana baseAsia banokukhetha isitayile ngeendlela ezahlukeneyo zeenwele zeematte. Sincoma ukukhanya ukuya kumodareyitha wokubamba isitayile okanye udongwe pomade kugqityiwe, kwendalo. Ezi ntlobo zeemveliso ziya kwandisa umthamo, ukuhamba kunye nokuhamba.
Sebenzisa isomisi seenwele, ukuba kukho imfuneko, ukufumana umoya ovuthuzayo okanye isitayile, isitayile esingaphandle kwebhedi. Amathuba apha anokuphela.
Ezona Mveliso ziNwele ziLungileyo kwiNwele zaseAsia
Inkqubo ye- Eyona mveliso yeenwele yeenwele zaseAsia ngokwenene kuxhomekeke kwiindidi zeenwele zamadoda ofuna ukuzenza. Ngamafutshane, iinwele ezingqindilili ezifuna ukuthanjiswa kwaye zilawulwe, eyona pomade ilungileyo iza nokubamba okuqinileyo.
I-pomade elungileyo inokusetyenziselwa ukwenza isitayile ikama ngaphezulu, iinwele ezihlikiweyo zangasemva, ipompadour, i-faux hawk okanye umphezulu omdaka. Iimpawu eziphambili ze-pomade zibandakanya Suavecito , Uluhlu , UBaxter waseCalifornia , kunye Isinqumelo .
Kwicala elineflip, iinwele ziyathandeka INtloko yeBhedi yeTIGI inokuba yimveliso enkulu yesitayile sematte yokujonga kwendalo, okubonakalayo. Kwangokunjalo, amadoda aseAsia aneenwele eziphakathi ukuya ezinde ezifuna ivolumu kunye nokuhamba ziya kukhetha udongwe olungenasiphelo okanye ukhilimu weenwele. Siyacebisa Layrite yendalo Matte Cream , Udongwe oluSyothayo lweViking , kunye I-American Crew Yokwenza I-Cream .
Kwaye nangona kunokuba nzima ukufumana ijeli yeenwele elungileyo engaflaki okanye iqine, ezinye iibrendi zifumene iindlela zokuphuhlisa ijeli yesitayile ekufuneka isetyenzisiwe, kubandakanya Iqela laseMelika kwaye IGot2B .
Ngoku ekubeni ubonile iinwele zamadoda zaseAsia ezithandwayo phaya, lixesha lokuba ujonge ezinye iimveliso ezazenziwe ngohlobo lweenwele zakho engqondweni. Ezi mveliso ziya kukunceda uthayiphe iinwele ezilungileyo kwiinwele ezipholileyo zaseAsia.
Nazi iimveliso zeenwele ezilungileyo zamadoda aseAsia. Ukusuka kwi-pomades elungileyo ukuya kwi-wax ekalwe ngaphezulu, udongwe, iikhrimu kunye neegel, zama ezi mveliso zesitayile samadoda sineenwele ezomeleleyo, ezichanekileyo zaseAsia.
Udongwe lweNwele lwaMadoda | I-Smooth Viking Clay Pomade yeMatte egqityiweyo kunye nokuBamba okuQinisekileyo (ii-2 ii-ounces) -i-Non-Greasy ... Izimvo eziyi-3,481 I $ 13.97 Jonga iAmazon
ikweyiphi indlu i-chiron yam
zonke iinwele emhlabeni
iinwele zamadoda zinciphisa iinwele
amacala achetyiweyo ukucheba iinwele ezinde